Author Topic: Nepali Movies till date (Read 61427 times)
Another list with date of release
* Aadi Kabi Bhanubhakta (1999)
* Aafno Manchhe (2001)
* Aago (2000)
* Ae Pandit Baje
* Aankha Lobhi Man Papi
* Aashirbad (2001)
* Afanta (1999)
* Afno Ghar Afno Manche (2001)
* Ajambhari Maya (2002)
* Alpaviram (2006)
* Aama (1964)
* Anjuli (2002)
* Apsara (2000)
* Army (2001)
* Baacha Bandhan (2002)
* BabuSaheb (2002)
* Badal Paree (2001)
* Baimani (2001)
* Bajrapat ( ?)
* Bakshis (2002)
* Basain (2005)
* Basanti (2000)
* Ber Pipal (2001)
* Bhagya Le Jurayo (2002)
* Bhai Tika (2002)
* Bihani (2001)
* Buhari (2001)
* Chameli (1999)
* Cheli Beti (1995)
* Chino (1991)
* Chokho maya
* Chor Sipahi
* Daag (2001)
* Daiva Sanjog (2001)
* Dakshina (1993)
* Dancing Kathmandu (2006)
* Darpan Chaya (2002)
* Dhansamphati (2002)
* Dhukdhuki (2000)
* Dulahi (2001)
* Dusman (1993)
* Gaajal (2001)
* Gaunthali (2001)
* Haami Teen Bhai(2004)
* Hateri (2002)
* Haudey (2001)
* Himalaya – l’enfance d’un chef (1999)
* Janma Bhoomi (1995)
* Jaya Baba Pashupati Nath (1996)
* Je Bho Ramrai Bho (2003)
* Jeevan Rekha
* Jeevan Saathi (2001)
* Jetho Kancha (2003)
* Kaidi (2001)
* Kanchi (1988)
* Karma (2006/I)
* Karma Ko Phal
* Ke Bho Lau Na Ni (2001)
* Khandan (2002)
* Krodh (2006)
* Maan (2002)
* Mahadevi (1993)
* Malai Maaf Garidau (2002)
* Malati (2002)
* Mama Bhanja (2002)
* Mamaghar (2002)
* Manai Ta Ho (2001)
* Manmandir (2002)
* Ma timi bina marihalchhu (2008)
* Maya Baiguni (2001)
* Maya Ko Saino (2001)
* Maya Namara (2002)
* Melong (2002)
* Mero Hajur (2002)
* Mitini (2002)
* Mohani Lagla Hai (2002)
* Mukundo (2000)
* Muna Madan (2003)
* Muskan (2002)
* Nata Ragat Ko (1999)
* Natedar (2001)
* Nepal Pyaro Chha (2001)
* Numafung (2001)
* Paral Ko Aago (1978)
* Parenni Maya Jalaima (2004)
* Pheri Temro Yaad Aayo (2002)
* Pijanda (2002)
* Pirati Aafai Hudon Rahechha (2001)
* Pooja (2002)
* Prem Pinda (1995)
* Raanko (1996)
* Ragat (1995)
* Ram Balram(2007)
* Rickshaw Puller, The (2002)
* Rough Cut on the Life and Times of Lachuman Magar, A (2001)
* Sagarmatha (1988)
* Sagun (1998)
* Sahid Gate (2002)
* Sannani (1994)
* Sano Sansar (2008)
* Santan Ko Maya (2002)
* Sanyas (2002)
* Sauta (1993)
* Shadhyantra (2002)
* Shankar (1997)
* Siudo Ko Sindoor (2001)
* Spirit Doesn’t Come Anymore, The (1997)
* SuperStar (2001)
* Tapasya (1991)
* Thuldai (1999)
* Timi Meri Hau
* Timrai Lagi (2001)
* Yastai Rahecha Jindagi (2002)
* Yeh Mero Hahur(2002)
* Yo Kasto Saino (2001)
* Yo Maya Ko Sagar (2001)
* Yug Dekhi Yug Samma (1992)
पर्ढाई कम रवाफ बढी
चलचित्रको रंगीन दूनियाँमा प्रवेश गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन तैपनि वलिउड र हलिउडमा चलचित्र उद्योगमा क्रियाशील कलाकर्मीहरु आफ्नो पर्ढाईपुरा गरेर मात्र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । बलिउडमा अहिलेका पुस्ताका नायक/नायिकाहरु प्राय स्नातक र स्नातकोत्तर पूरा गरेर सिने क्षेत्रमा आएका छन् । तर नेेपाली चलचित्रका नायक केही हदसम्म शिक्षित नै भएपनि नायिकाहरु न पढाइ पुरा गरेर यो क्षेत्रमा छिरेका छन् न उनीहरुमा फर्ुसदको बेला पुस्तक पढ्ने बानी नै छ । यहाँ अझै पनि एस.एल.सी पनि उत्तर्ीण्ा गर्न नसकेका नायिकाहरुकै हालीमुहाली छ । स्तरीय चलचित्र निर्माणका लागि त्यससँग सम्बन्धीत जनशक्ति दक्ष पनि हुनर्ुपर्छ । त्यसपछि मात्र स्तरीय चलचित्रको आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाली चलचित्रको नायिकाको कुरा गर्दा रेखा थापा हुन् वा रेजिना उप्रेती, मेलिना मानन्धर हुन् वा रिचा घिमिरे, अरुणिमा लम्साल हुन् वा नन्दिता के.सी., रन्जु लामिछाने हुन कि वा गरिमा पन्त यी सबै नायिकाहरुको शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. वा त्यसकै हाराहारीमा छ ।
केही वर्षपहिले सिनेमा ँटम्ब राइडर’ की नायिका एन्जेलिना जोलीलाई र बलिउड नायिका मनिषा कोइरालालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सद्भावना दूत नियुक्त गरेको सुन्दा नेपाली सिनेकर्मीहरुले आर्श्चर्यले ज्रि्रो टोके । उक्त निर्र्ण्र्ाालाई यहाँ ँआकाशको फल’ ठान्नुको प्रमुख कारण हो - अभिनय क्षेत्रमा अल्पशिक्षाको वाहुल्य । कम्वोडिया र सियरालियोन स्थित शरणार्थी शिविरका केही दृष्य समेटिएको ँटम्ब राइडर’की एन्जेलीना र भारतिय उपमहादिपमा मनिषाको लोकप्रियता हेरेर उनीहरुलाई सम्बन्धीत मामलाको दक्षताको कारण राष्ट्रसंघले उक्त सम्मानित जिम्मेवारी सुम्पेको हो । यस्तै प्रकृतिको जिम्मा हालै नेपाल सरकारले नायिका विपना थापालाई सुम्पेको थियो । तर उनले जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा नगरेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
लोकप्रिय सिने कार्यक्रम ँरजतपट’ मा सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदीले केही वर्षपहिले धेरै कलाकारलाई भेला गराएर ँसगरमाथाकोे उचाई कति छ -’ भनेर सोध्दा कसैले सही उत्तर दिन नसकेको घटना यहाँ सम्झन लायक छ । त्यतिमात्र होइन, त्यसमध्ये कतिले त तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको नाम समेत भन्न जानेका थिएनन् । नेपाली कलाकारहरुको अध्ययनको घेरा भने साँघुरो नै छ । नेपाली चलचित्रकी एक स्थापित नायिकासँग मैले अन्तर्वार्ताको क्रममा सोधेको थिए ँद्रव्य शाहको जन्म कहाँ भएको थियो - उनले थाहा छैन भनिन् । फेरी मैले सोधे -\_"रोल्पा, रुकुमको नाम सुनेको छ -\_" उनले भनिन् - छैन । हामी कलाकार राजनीतिको त्यति मतलव राख्दैनौं ।\_" उनले देशको भूगोल र राष्ट्रियतालाई राजनीतिसँग जोडेर आफू उम्किने प्रयास गरिन् । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपाली महिला कलाकारहरु अध्ययनशील छैनन् । ती नायिका त मात्र एउटा उदाहरण हो । खोज्दै जाने हो भने यस्ता अल्पज्ञान भएका असंख्य नायिका यहाँ पाइन्छन् ।
अहिलेपनि त्यो अवस्थामा खास सुधार आउन सकेको छैन । केही पुराना र केही नयाँ कलाकार पढे-लेखेका भित्रिए पनि अनपढको जमातमा उनीहरु गन्तीमै आउन गाह्रो छ । प्राविधिकहरु भन्छन् -ँअल्पशिक्षाका कारण धेरै कलाकारलाई अलि घुमाउरो संवाद र केही अप्ठेरा शब्द घोक्न ँवालकलाई तितो दवाई सुवाउनुभन्दा गाह्रो पर्छ ।’ हुन पनि एक स्थापित कलाकारको एउटा दृष्यको सुटिङमा खुबै रमाईलो घटना भएको थियो । संवादको बीचमा ँप्रजातन्त्र’ भन्ने शब्द आयो । संवाद कण्ठाग्र पारेको भए पनि ँप्रजातन्त्रमा पुगेपछि ती नायकले ँप्रातन्त्र’,ँपरातन्त्र’भन्दा शुद्ध उच्चारण गर्नै सकेनन् । एक, दर्ुइ गर्दै ँप्रजातन्त्र’मा दर्जनभन्दा बढी टेक खाएपछि हैरान भएका निर्देशकले नयाँ जुक्ति निकाले - एक प्राविधिकको निधारमा ँप्रजातन्त्र’ लेखेको कागज टाँसियो, उनलाई क्यामेरा छेउमा उभ्याइलो र हिरोलाई उनको निधारमा हेरेर पढ्न लगाइयो । ती प्राविधिक त्यो घटना सम्झेर भन्ने गर्छन् -ँमेरो निधारमा अझै ँप्रजातन्त्र’ छ जस्तो लाग्छ ।’ त्यो घटनाबाट सिकेका निर्देशकले अहिले पनि अप्ठेरा र अंग्रेजी शब्दमा ँकागज टाँस्ने कला’ दोहोर्‍याइरहेका छन् ।
केहीलाई छाड्ने हो भने हाल नेपाली अभिनय क्षेत्रको मूल प्रवाह ँएस.एल.सी. फेलको जमात’ मै सिमित छ । नायिका तर्फयो रोग झन चर्को छ । सुपर हिट नायिका रेखा थापादेखि विपना थापा, मेलिना मानन्धर, रेजिना उप्रेती, उषा पौडेल, निरुता सिंह, सिरु विष्ट, दिपा श्री, गरिमा पन्त, पूजा लामा, पूजना प्रधान, रञ्जु लामिछाने, झरना थापा, सिरु विष्ट आदि सम्मले औपचारिक रुपमा क्याम्पसको अनुहार देखेका छैनन् ।
राजधानीको कान्ति इश्वरी स्कूलमा पढाउने मिथिला शर्मा यस क्षेत्रमा संक्रिय महिलातर्फसम्भवतः एक्लो स्नातक हुन् । ड्रि्रीसम्म पढेकी सनी रौनियार दैव संजोग, सिता, प्रेमपिण्ड पछि पलायन नै भएकी छन् भने क्याम्पसको अनुहारसम्म देखेका नायिकाहरुमा झरना ब्रज्राचार्य, नन्दिता के.सी., सरीता लामिछाने, सञ्चिता लुइटेल, ऋचा घिमिरे आदि हुन् । समय समयमा अध्ययनमा राम्रो दखल भएका अभिनेत्रीहरु प्नि यो क्षेत्रमा नआएका होइनन् तर उद्योगमा टिक्नै सकेनन् । अन्यत्रका कलाकार गहन कूटनितिक जिम्मेवारीको हैसियत राख्ने अवस्थामा हुँदा नेपाली सिने उद्योगबाट चाँहि पढे लेखेका नायक-नायिका किन पाखा लाग्ने गरेका छन् - उत्तर सायद यही हुनर्ुपर्छ -यहाँ पढे लेखेकालाई टिक्ने वातावरण नै छैन । हुन पनि यस क्षेत्रमा पढेका भन्दा नपढेकाको उन्नति र रवाफ ठूलो हुने गरेको छ ।
निर्देशक युवराज लामाका अनुसार जुनसुकै चलचित्र निर्देशनको क्रममा पनि पढेका र नपढेका कलाकारहरुबीच ठूलो अन्तर आउँछ । उनीहरुको बोलाई, हिर्डाई, गर्राई र व्यवहारमा नै ठूलो अन्तर हुने उनको अनुभव छ । चलचित्र निर्देशनको क्रममा पढेका कलाकारले संवादको भाव बुझ्न सक्छन् र जुन प्रयोजनको लागि गर्न खोजिएको हो त्यही अनुसार गर्छन्, भने नपढेकाले त्यसको मूल मर्म बुझ्न सक्दैन् निर्देशक लामा भन्छन् । उनको अनुसार हाम्रो चलचित्र उद्योगमा पढेको भन्दा नपढेका कलाकारहरुको संख्या बढि छ । पर्ढाई सकेका भन्दा गर्दै अनुभव संगाल्नेहरुबाट काम चलाउनु परेको छ ।
चलचित्रमा राम्रो कलाकार बन्न ड्रि्री नै नचाहिने भए पनि अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा पढेको कलाकार भएपछि हाम्रो चलचित्रको स्तरमा निश्चय पनि सुधार आउने थियो । हाम्रा चलचित्रहरु स्तरीय नहुनुमा यो पनि एक कारक तत्व हो । कलाकारहरुले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा समेत जानुपर्ने, सभा सम्मेलनमा र विभिन्न संचारमाध्यमहरुसँग आफ्ना भनाईहरु राख्नुपर्ने भएकोले समेत अहिले अंग्रेजी जानेको र पढे, लेखेको हुनु जरुरी नै भइसकेको छ । आउँदा दिनमा हाम्रो चलचित्र उद्योगमा पनि पर्ढाई पुरा गरेर मात्र आउने परिपाटीको थालनी हुनसके हाम्रा चलचित्रहरु प्नि स्तरीय हुने कुरामा शंक गर्ने ठाउँ रहँदैन ।
बढे डिजिटल फिल्म
29/08/2009 16:48:00 प्रवीण बुढाथोकी
खस्कँदै गएको नेपाली सिनेमाको बजार बिस्तारै उकालो चढ्दै छ । हिन्दी फिल्मको बाहुल्य रहने उपत्यकाका हलमा नेपाली फिल्म पनि उत्तिकै चल्न थालेका छन् । जुन तहका भए पनि अहिले हलमा दर्शक प्रशस्तै देखिन थालेका छन् । नेपाली सिनेमाको बजार माथि उठेकै हो त ? के-केमा प्रगति गर्‍यो होला, नेपाली सिनेमा बजारले ?
चर्चित म्युजिक भिडियो निर्देशक भूषण दाहालले कागबेनी निर्माण गरे, 'डिजिटल प्रविधिमा' त्यो पनि नयाँ कथावस्तु लिएर । फिल्म हिट पनि भयो । बौद्धिक वर्गले फिल्म रुचाए पनि । कागबेनीमा प्रयोग भएको डिजिटल प्रविधि नेपालमा भित्र्याएका थिए जय नेपाल हलका सञ्चालक नकिम-सुद्दिमले । कागबेनी एकैसाथ विश्वभर प्रदर्शन भयो । पटकथाको निकै आलोचना गरे फिल्मी समीक्षकले । तर, नयाँ प्रविधिको स्वागत पनि एकैसाथ भयो । नेपालमै पहिलोपटक 'टेक-२' क्यामेराको प्रयोग गरेका थिए दाहालले कागबेनीमा । ओस्कार विजेता फिल्म 'स्लमडग मिलेनिएर'मा पनि सोही क्यामेराको प्रयोग भएको थियो । वर्षौंंदेखि नेपाली फिल्म उद्योगले खेप्दै आएको पुरानै प्रविधि, विदेशी फिल्मबाट प्रभावित कथावस्तुजस्ता आरोपलाई निराधार बनाइदियो कागबेनीले ।
अर्का म्युजिक भिडियो निर्देशक आलोक नेम्वाङले त्यही प्रविधिलाई निरन्तरता दिए— फिल्म सानो संसारमा । सबैतिरबाट वाहवाही पाए उनले । त्यसपछि धेरै निर्माताले त्यही प्रविधिमा चलचित्र बनाउन थाले । कागबेनीबाट भित्रिएको डिजिटल प्रविधि सानो संसार, म तिमीबिना मरिहाल्छु, सलाम छ मायालाई, गिरफ्तार, सिलसिला, हाम्रो गन्तव्य, कहाँ भेटिएलालगायत ५० भन्दा बढी फिल्ममा देख्न पाए दर्शकले । अहिले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको मेरो एउटा साथी छ, द युगदेखि युगसम्म, कृष्णालगायत दर्जनौँ फिल्ममा पनि डिजिटल प्रविधिकै स्वाद पाउनेछन् दर्शकले ।
यति छिटो यस प्रविधिले सफलता पायो, किन ? के फरक छ त पुरानो र नयाँ प्रविधिमा ? फिल्म निर्देशक तथा निर्माता संघका अध्यक्ष अशोक शर्मा भन्छन्, 'अहिलेका दर्शक हरेक एंगलबाट उत्कृष्ट फिल्म हेर्न चाहन्छन्, डिजिटल प्रविधि भित्रिएपछि फिल्मको क्वालिटीमा सुधार आएको छ ।' नेपालमा डिजिटल फिल्मको काम डिजिटल सिनेमा नेपालले गर्दै आएको छ । अध्यक्ष शर्मा डिजिटल सिनेमा नेपालका प्रबन्ध-निर्देशकसमेत हुन् । डिजिटल प्रविधिमा फिल्म बनाउँदा निर्मातालाई फाइदा/घाटा के ? 'पहिले फिल्म खिच, त्यसपछि नेगेटिभ बनाऊ, फेरि रिल बनाऊ, प्रक्रिया लामो थियो, अहिले तयारी फिल्म हार्डडिस्कमा लोड गरे मात्र पुग्छ,' शर्माले भने, 'निर्माताको समयको बचत त हुन्छ नै त्यसमाथि पनि आठदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म निर्माण-खर्च कम लाग्छ ।'
डिजिटल प्रविधिमा निर्माण गरिएका फिल्म युनाइटेड फिल्म अर्गनाइजेसन, मुम्बईका माध्यमबाट डिजिटल प्रविधिका सम्पूर्ण हलमा एकैसाथ प्रदर्शन गरिन्छ । काठमाडौंका जय नेपाल, कुमारी, गुण, वाराही, अष्टनारायण, पृथ्वी गरी १२ हल तथा काठमाडौंबाहिर बिर्तामोड, धरान, दमक, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, वीरगन्ज, नारायणघाट, पर्सा, पोखरा, नेपालगन्जलगायत नेपालका ४६ वटा सिनेमा हलमा एकैसाथ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल प्रविधिमा निर्मित फिल्म 'कहाँ भेटिएला'का निर्माता तथा नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ यस प्रविधिको नयाँ स्वाद दर्शकले पाउने बताउँछन् । 'फिल्मको पि्रन्टमा पनि क्वालिटी हुन्छ र हलमा पनि सजिलै देखाउन सकिन्छ ।' प्रविधि त भित्रियो, तर कथावस्तु त पुरानै ढर्रामा छन् नि ? 'मेरो चलचित्रमा कथावस्तुदेखि लिएर सबै कुरामा नयाँ प्रयोग गरेको छु,' नायक श्रीकृष्णले सुनाए, 'सबै सिनेमा हलमा डिजिटल प्रविधि राख्नुपर्‍यो, अनि मात्र नेपाली चलचित्रको विकास हुन्छ ।'
कला चलचित्र नवयथार्थवाद र फिल्मकार
फ्रान्सेली नयाँ चलचित्र (नाउभ वेग)ले साठीको दशकमा नै फिल्मकारहरुमा अलग वर्ग उभ्याइदियो। समानान्तर चलचित्र, कला चलचित्र र नयाँ चलचित्र नामबाट फिल्मकारहरुले आफूलाई उभ्याउन थाले। केवल एक भाषा उनीहरुको समान भयो, त्यो हो– दृश्य भाषा। जसको माध्यमबाट जीवनको यथार्थलाई पर्दामा उतार्न सक्नेछन् र कला चलचित्रको उद्देश्य हो– स्टार पद्धतिलाई भंग गर्नु। तर कला चलचित्रको उमेर एक दशक पनि नपुग्दै यसमा समाहित कलाकार, निर्देशक र निर्माताहरुलाई लोकप्रिय चलचित्रको धारले बदल्न थाल्यो।
खासमा सन् १९०३ मा बनेको 'द ग्रेट ट्रेन रवरी' विश्वको पहिलो सिनेमा मान्ने हो भने सिनेमाले एक सय पाँच वर्ष पार गरिसकेको छ। यसबीचमा हजारौं फिल्महरु बने तर थोरै मात्र कालजयी फिल्मले दर्शकको मन जित्न सकेका छन्। भारतीय फिल्म समीक्षक विजय अग्रवाल लेख्छन्– 'कलात्मक चलचित्रको जन्म आफ्नो समयको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थितिहरुको गर्भमा भयो। यसैले यसको प्रसव पीडाको अलग्गै व्यथा छ। व्यावसायिक फिल्महरुको चका चौधका बीच परिस्कृत रुचि भएका फिल्महरु बनाउने साहस गर्नु कम चुनौतीको काम थिएन।' यस बीचमा पनि कला चलचित्र लोकप्रिय चलचित्रको तुलनामा थोरै बनेका छन् जुन चलचित्रले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बचाइरहन्छन्।
१९५० अघि जापानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान थिएन। पचासको दशकमा आकिरा कुरोसावको 'रासोमोन'को प्रदर्शनपछि सार्थक चलचित्रको निर्माण र प्रदर्शनमा जापान अग्रपंक्तिमा आयो। यही चलचित्रको असरले १९५५ मा भारतमा पनि त्यस्तै कालजयी फिल्म बन्यो जुन अहिलेसम्म पनि चलचित्रको आदर्श बनेको छ। १९५६ मा सत्यजीत रेको 'पाथेर पाञ्चाली'को प्रदर्शनले त्यो कदमको अनुशरण गर्‍यो। फिल्म रिलिजपछि भारतलाई लाखौं विदेशी दर्शकले 'सत्यजीत रेको देश' भनेर सम्भि्कन थाले। 'हिस्ट्री अफ फिल्म' र धेरै चलचित्रसम्बन्धी समीक्षा, आलोचना, पुस्तकका लेखक जैक सी एलिसले एसियाली निर्देशक सत्यजीत रेको 'पाथेर पाञ्चाली'को प्रदर्शनको टिप्पणी गर्दै भनेका छन्– 'त्यो एकदमै अप्रत्याशित घटना हो। एकदमै अपरिचित, सत्यजीत रे नामक एक युवकले कुरोसावाको फिल्मलाई पछ्याउँदै आफ्नो कृति प्रदर्शन गरे। जबकि कुरोसावाबाट प्रभावित भए पनि त्यसभन्दा भिन्नै र त्यसको प्रतिनिधित्व गरेको भन्न नमिल्ने खालको यो फिल्म, शुद्ध भारतीय माटोमा बनेको यसमा इटालीमा सुरु भएको नवयथार्थवादको प्रभावचै थियो। गहिरो सामाजिक सम्बन्ध, गैरअभिनेताहरु र छायांकन भएका स्थलहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय शैलीको अनुकरण थिएन।'
लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र तत्कालीन कम्युनिष्ट मुलुक रुसबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पनि भारतीय सिनेमाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हुन्। एक समय थियो जतिबेला राजकपुर तथा नरगिस दत्तका फिल्म रुसमा अति लोकप्रिय हुन्थे। अझै भारतलाई रसियनहरुले राजकपुर तथा नरगिसको देश भनेर चिन्ने गर्छन्।
भारतमा कला चलचित्रको आन्तरिक प्रेरणा स्रोत सत्यजीत रे नै हुन्, जसले 'पाथेर पाञ्चाली' बनाएर विश्व चलचित्रको ध्यान आकृष्ट गरे र नेपाली सिनेकर्मी र दर्शकलाई पनि त्यसप्रति मोहित बनाए। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले पनि लोकप्रिय चलचित्रको धार बदलेका हुन्। र कला चलचित्रतर्फ नेपाली फिल्मकारहरु आकृष्ट भएका छन्। नेपाली लोकप्रिय चलचित्रको धार बदल्नमा भारतमा बनेका सत्यजीत रे शैलीका फिल्महरुले एउटा बाटो बनाएको सत्य हो। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गोविन्द निहलाणी, बासु भट्टाचार्य, अडडुर गोपालकृष्ण, मणिकौल, कुमार साहनी, एसएस सथ्यु, कुन्दन शाह, मणि रत्नम, मीरा नायर, दीपा मेहता, अर्पणा सेनजस्ता भारतीय फिल्मकारहरुले नेपाली चलचित्रका दर्शक, निर्देशक र फिल्म समीक्षकको कला चलचित्रप्रति रुचि परिवर्तन गरेको मात्र नभई उत्साह पनि थपेको हो।
२०२२ सालमा हिरासिंह खत्रीको निर्देशनमा बनेको 'आमा' र २००७ सालमा भारतबाट नेपाली भाषामा बनेको सत्य हरिशचन्द्रलाई पहिलो नेपाली फिल्म मान्ने हो भने नेपाली फिल्म यात्राले अहिले ४३ वर्ष पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली फिल्म बने तर तीमध्ये एउटाले पनि आफूलाई उच्चकोटीमा पार्न सकेन। लोकप्रिय चलचित्रको धार बदलिए पनि कला चलचित्रमा फिल्मकारहरु ठ्याक्कै भिज्न सकेनन्।
हुन त केही वर्षअघि नेपालमा 'क्याराभान' बन्यो। यस फिल्मले नेपालको डोल्पालाई अमेरिका तथा युरोपका धेरै देशमा पुर्‍यायो। तर 'क्याराभान' फ्रान्सेली निर्देशक एरिक भ्यालीको फिल्म बनेर रह्यो। नेपालमा बनेका केही कला चलचित्रले आफूलाई उचाइमा पुर्‍याएका हुन्। निर्देशक नवीन सुब्बाले 'नुमाफुङ'लाई फ्रान्सको भेसोल सिनेमा महोत्सवमा पुर्‍याए। 'कला फिल्महरुमा नगर–गाउँसम्म सरोकार राख्ने तात्कालीन समस्याहरुलाई उठाइन्छ, जुन समस्यासित फिल्मकार भित्री तवरमा परिचित हुन्छन्। 'नुमाफुङ'मा पनि त्यसै भएको थियो। भारतमा कला–फिल्मको जरो सुरु भएको सन् १९७० मा रफतारमा अघि बढ्यो र यसैको अन्तर स्रोत पछि नेपालमा दश वर्षपछि 'परालको आगो'मार्फत् सुरु भयो। प्रताप सुब्बाले सुरु गरेको यो परम्पराले खासै गति लिन भने सकेन। त्यसपछि उनले परालको आगोहरु बनाउन सकेनन्। केही चलचित्र बनाएपछि आफैं ओझेल परे। फिल्मकार तत्कालीन समस्याहरुसित भित्री तवरमा परिचित हुन सकेनन्।
देशमा फिल्म वितरणको सुव्यवस्था नभएको कारणले र कमजोरीले पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सार्थक फिल्म बन्न सकेन। यसका पछिल्ला उदाहरण सस्ता नेपाली फिल्महरु हुन् जुन बौद्धिक दर्शकले हेर्दैनन्। नेपालमा केही कला चलचित्र बने पनि त्यसैको धारमा पछि तिनै फिल्मकारले त्यस्तो चलचित्र बनाउन सक्दैनन्। निर्देशक नीर शाहले डा. ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास 'कट्टेल सरको चोटपटक'मा आधारित भएर 'वासुदेव' बनाए तर पछि उनी त्यही बाटो हिंड्ने सासह गर्न सकेनन्।
निर्देशक तुलसी घिमिरेले 'दक्षिणा' बनाए। त्यस फिल्म बौद्धिक जमातको मन–मस्तिष्कमा बस्यो। तर पनि कालजयी फिल्म बन्न सकेन। यहाँ 'वासुदेव', 'नुमाफुङ', 'दक्षिणा', 'परालको आगो', 'बसन्ती' फिल्म राम्रा प्रयास हुन्। तर पनि यिनीहरुले आफूलाई कला चलचित्रको विशिष्ट धारमा उभ्याउन सकेनन्। कला चलचित्रको केही पभाव भए पनि यी फिल्महरुले लोकप्रिय चलचित्रको धार बदल्न सकेनन्।
नेपालमा 'नुमाफुङ' बने पनि 'पाथेर पाञ्चाली' बन्न सकेन, 'रासोमोन' बन्न सकेन। समानान्तर चलचित्र, कला चलचित्र र नयाँ चलचित्र किसिमका फिल्महरुको विशेषताका रुपमा कम बजेट, यथार्थ फिल्महरुमा आधारित विषयवस्तु र स्थानीय दृश्य महत्वपूर्ण हुन्छन्। नेपाली फिल्महरुमा व्यवासायिक र कला चलचित्रको धार छुट्टिए पनि कला चलचित्रलाई माध्यम बनाएर अघि बढ्न भने सकेन।